Maxaad Tareen Travel In Germany Ma la yaabka leh | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Jarmalka > Maxaad Tareen Travel In Germany Ma la yaabka leh
Jarmalka wuxuu leeyahay buuro haybad leh, baadiyaha neefta qaadanaya, iyo magaalooyinka cosmopolitan taas oo ka dhigaysa safarka tareenka halkaas khibrad soo jiidasho leh. Waxaa jira meelo badan oo heer sare ah in la arko oo ay ku jirto Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, iyo Frankfurt, iyo kuwa kale oo badan. goobaha Kuwani iyo magaalooyinka yaryar ayaa dhamaantood isku xidhan by a hi-speed wanaagsan loo soo abaabulay nidaamka tareenka. Taas ayaa ka dhigaysa safarka tareenka ee Germany si fudud. Halkan waa hage loogu talagalay holidaymakers waayo, safarka tareenka ee Germany si loo hubiyo in aad ugu leeyihiin safarka raaxo suurto gal.
Tareenka kala duwan la heli karaa
The network tareen Jarmal waxaa ka shaqeeya Deutsche Bahn. Tani waxay siisaa tiro ka mid ah noocyada tareen si ay habeen iyo maalinba aad qaado. Shabakadda tareenka ugu weyn ee Germany wuxuu ka kooban yahay tareenka gobolka (sida express gobolka) iyo tareenada Intercity. tareenada Intercity gudaha iyo dibadda ku shaqeeyaan inta u dhaxaysa magaalooyinka muhiimka ah.
Waxa kale oo jira siyaabo kale oo loo tabobaro safarka ee Germany sida tareenada-xawaaraha sare ee guriga, The ICE (Intercity Express). Tani waa tareenka ugu caansan ee Germany, isku xirta magaalooyinka muhiimka ah ee xawaaraha sare. Kuwani tareenada-xawaaraha sare safri xawaare ilaa 200mph (320 km / h).
Ma u baahanahay inaan ka dhigi Boos kursiga tareenada Jarmal?
Isticmaalka ugu fiican ee safarka tareenka ee Jarmalka waa inta lagu jiro maalinta, oo ay ku jiraan si degdeg ah Intercity Express, uma baahna boos celin boos. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku talajirto in safarka ma jiraan wax dhibaato ah ee tayaasha kuraasta aad ka hor. Xafido kursiga daaqad loogu talagalay muuqaal ah ama aad ku doorato kursiga si loo hubiyo in aad la kulanto raaxada ugu badnaan.
Qaar ka mid ah tareenada International iyo wadooyinka habeenkii sida in Paris, Brussels, Venice, ama Copenhagen ha u baahan tahay in aad leedahay Boos ka hor inta hoyga ah. Marka la isticmaalayo goobta Save A Tareen inay jartaan tikidhka tareenka aad, waxay sheegi doonaa haddii aad ayaa looga baahan yahay si ay u sameeyaan Boos.
Isticmaal sanduuqyada saldhigga – safarka tareenka ee Germany
Inta badan saldhigyada tareenka ee Jarmalka waxay leeyihiin bangiyo badan oo ah lookarro cabirro kala duwan leh. Tani waa inay meel weynba iyo boorsooyinka waaweyn. Haddii aad qabto saacad ama si ka hor caleemo tareen xira, qortid Alaabtoodii galay labiska ah, u tagto cabniin ah, ama ka eeg gaaban agagaarka degaanka ku hareereysan.
Frankfurt inay Tareenadu Hanover
Brussels si Tareenadu Hanover
Cologne si Tareenadu Hanover
Qiimaha ah ee lookarrada go'aamiso qiimaha. Taas macnaheedu waxa weeye haddii aad u baahan tahay wax ka yar lagu kaydiyo oo boorsooyinka, waxaad bixinaysaa in ka yar iyo qeybsanaan ku xigeenka. kala duwan ee qiimaha ah ee lookarrada saldhiga ee Germany u dhaxaysa € 1 – € 5 24 saacadood isticmaalka.
Carruurta tabobaro kara safarka ee Germany for free
Germany waa meel fiican si ay u safri qoyska. On tareenada tareenka Jarmal, carruurta da'doodu ka yar tahay lix sano waxay ku safraan bilaash iyada oo aan loo baahnayn tikidh. Carruurta ayaa dhammaaday 6 laakiin da'doodu ka yar tahay 15 sidoo kale u safri for free marka la socon qof weyni rakaab-bixinta a.
Fikirka qaadashada tareen agagaarka Germany? Tag Si badbaadi A Tareen Online si aad u hubiso soo baxay oo dhan qiimaha our gaar ah iyo bilaabaan qorshaynta quudhin soo socda! na raac on Facebook, Twitter, iyo Save A Tareen Instagram Page in sidoo kale arki dalabyo ugu dambeeyay oo dheeraad ah!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
deutschebahn tareen safarka Talooyin safarka tareenka travelgermany
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe